नेपालमा के सम्भव छैन ? सबै सम्भव छ : सूचना अायुक्त बास्काेटाकाे दृष्टिकाेण-Setoghar
नेपालमा के सम्भव छैन ? सबै सम्भव छ : सूचना अायुक्त बास्काेटाकाे दृष्टिकाेण
कृष्णहरी बास्कोटा, प्रमुख सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
नेपालमा रोमाञ्चक खेलहरुमा पदयात्रा र रक क्लाइम्बिङ छन्, जुन संसारमा नै प्रख्यात छन् । नेपाली कागज, नेपाली करुवा, नेपाली हस्तकलाजन्य सामानहरु, नेपाली कागजबाट बनेका सामानहरु संसारमा नै हटकेकको रुपमा देखिएका छन् । नेपालका चाँदीका भाँडा र तामाका भाँडाहरुको सम्भावना विश्वबजारमा नै निकै राम्रो छ । नेपालमा बहुमुल्य पत्थरहरु उत्खनन र प्रशोधन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । पश्चिना, गलैंचाको बजार राम्रो छ । भोटेकोशी र त्रिशुलीको र्याफ्टिङ अहिले संसारमा निकै नै प्रख्यात छ । नेपालमा रहेका रमणीय खेलहरुमा बन्जी जम्पीङको राम्रो सम्भावना छ ।
गत बर्ष नेपालमा ९७ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भयो । राम्रो बिउविजन, राम्रो सिँचाई र राम्रो रासायनिक मलमा जोड दियौं भने १ हेक्टर जग्गामा १० मेट्रिक टन खाद्यवस्तु हामी उत्पादन गर्न सक्छौं । नेपाली किसानलाई हाते ट्याक्टर, मिनी ट्रिलर लगायतका आधुनिक उपकरणबारे सामान्य जानकारी गराई उपलब्ध गराउने हो भने कृषिमा निकै नै सुधार ल्याउन सकिन्छ । संसारमा हरियो तरकारीमा निकै राम्रो मानिने नेपालमा १२ महिना नै बेमौसमी तरकारीहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ । तराई, पहाड र हिमालमा फरक फरक प्रकृतिका माछाहरु हामी पालन गर्न सक्छौं ।
हामी चिया र कफीमा आत्मनिर्भर भएर मात्र हुँदैन, अहिले पनि नेपालबाट उच्च गुणस्तरीय अर्गानिक चिया र कफी अमेरिका लगायतका विकसित देशहरुमा गइरहेको अवस्था छ ।
नेपाल छाला र छालाजन्य जुत्ताको निम्ति आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरु छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा पठाउने क्रममा हामीले भन्सार तिर्नुपर्दैन । तर भारतबाट नेपालमा आउने सामानको भन्सार नेपाल सरकारले भने लिँदै आएको छ । नेपालमा अर्गानिक खेतीको आगामी दिनमा निकै राम्रो सम्भावना छ ।
सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण अन्त्य गर्नु आवश्यक ः
नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहेको पुस्तौं–पुस्ता सम्म बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्वामित्व कायम रहने परिपाटी रहेकोमा यसलाई पनि हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले युरोपलाई हेर्न सक्छौं, जहाँ १८ बर्ष उमेर पुगेका छोराछोरीहरुलाई बाबुआमाले घरबाटै निकालिदिन्छन् । जसले गर्दा छोराछोरीलाई कसरी र के काम गरेर आफैं सफल बन्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुन्छ ।
अहिले जग्गा वितरण प्रचलन जुन किसिमले रहेको छ, यसमा केही समस्याहरु छन् । ती समस्या समाधानको निम्ति जग्गा बाँझो राख्ने प्रचलन हटाउन र जग्गा बाँझो राखेको पाइए त्यसलाई कारबाही स्वरुप सरकारले जग्गा आफ्नै नाममा नै लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक व्यक्तिले देशको एक जिल्लामा मात्र जग्गा किन्न पाउने, एउटा मात्र घर बनाउन पाउने लगायतका कामहरु गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले जतिपनि कृषि तथा पशु फार्महरु छन्, ती सबै किसानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । कृषि, वागवानी, चरण क्षेत्र सुरक्षित हुनुपर्छ । शिक्षामा जोनिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । जोनिङ भनेको सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने आफ्नै क्षेत्रमा अर्थात बानेश्वरका विद्यार्थीले बानेश्वरकै वरपरका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हो । जबकि बालाजुका विद्यार्थी बानेश्वर र बानेश्वरका विद्यार्थी बालाजु पुग्नु होइन ।
नागरिकको निम्ति स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । कुनै पनि नाममा यी क्षेत्रमा व्यापार गर्न पाईंदैन । स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने सबै व्यक्तिले कम्तीमा पनि १ बर्ष इन्ट्रन गर्नैपर्ने व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ । बर्षभरिमा १० ओटा भन्दा बढी विदा दिने प्रचलन रहनुहुँदैन । गाई जात्रा, घोडा जात्रा लगायतका क्रममा दिइने विदाहरु नेपालको विकासको निम्ति अनावश्यक र बाधक हुन् । आधाजसो विदा त किन दिइयो भन्ने सम्बन्धमा अधिकांश व्यक्तिहरुलाई थाहा नै हुँदैन ।
मुलुकका राजदूतहरु नियुक्त गर्ने कार्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुहुँदैन । राष्ट्रियताको निम्ति ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियशी’ भन्ने भावनाले अघी बढ्नुपर्छ ।
नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशिल र सन् २०३० सम्ममा विकसित मुलुक बनाउने गरी काम अघी बढाउनुपर्छ । हरेक नेपालीहरु अहिले तपाईं जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यही क्षेत्रबाट अघी बढौं । सम्पूर्ण नेपालीहरुको भाग्य र भविष्य तपाईंहरुको हातमा नै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुछ ।